Isahluko 96 | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ngizosola wonke umuntu ozalwa Yimi ongakangazi ukuze ngikhombise lonke ulaka Lwami, ngikhombise amandla Ami amakhulu, futhi ngikhombise ukuhlakanipha Kwami okugcwele. Kimi konke kulungile futhi akukho nhlobo ukungalungi, akukho nkohliso, akukho buqili; noma ngubani onobuqili nonenkohliso kufanele abe yindodana yesihogo—kufanele azalwe eHayidesi. Kimi konke kusobala; noma yini engithi ayifezwe iyafezeka futhi noma yini engithi ayisungulwe iyasunguleka, futhi akekho ongaguqula noma alingise lezi zinto ngoba nginguNkulunkulu oyedwa kuphela uqobo Lwakhe. Kulokho osekuzofika, wonke umuntu oseqenjini lamadodana Ami angamazibulo anqunyele ngaphambili nakhethwe Yimi uyokwambulwa ngamunye, futhi wonke umuntu ongekho eqenjini lamadodana Ami angamazibulo uyosuswa Yimi ngalokhu. Lena yindlela engenza futhi ngifeze ngayo umsebenzi Wami. Njengamanje ngambula abantu abathile ukuze kube amadodana Ami angamazibulo kuphela akwazi ukubona izenzo Zami ezimangalisayo, kodwa kamuva ngeke ngisebenze ngale ndlela. Kunalokho, ngizosukela esimweni esivamile kunokubenza bakhombise imvelo yabo yangempela ngamunye (ngoba amadimoni onke ngokuyisisekelo ayafana, kwanele ukukhetha okumbalwa kuphela njengezibonakaliso). Onke amadodana Ami angamazibulo acacelwe ezinhliziyweni zawo, futhi akukho sidingo sokuthi ngichaze (ngoba ngesikhathi esinqunyiwe nakanjani bayokwambulwa ngokulandelana).
Kuyimvelo Yami ukugcina izethembiso Zami futhi Kimi akukho okufihliwe nokucashile. Noma yini okufanele niyiqonde ngiyonitshela konke ngayo, kodwa noma yini okungafanele niyazi, lokho ngeke nginitshele nhlobo, ningaze ningakwazi ukuma niqine. Ningalondolozi okuncane bese nilahlekelwa okuningi—lokho ngeke kusize ngalutho ngempela. Kholwani ukuthi nginguNkulunkulu onamandla onke futhi konke kuyofezwa futhi konke kuyoba lula futhi kube mnandi. Yile ndlela engenza ngayo izinto. Lowo okholwayo, ngimvumela ukuba abone, futhi lowo ongakholwa angimvumeli nhlobo ukuba aqonde. Kimi akukho muzwa noma isihe, futhi lowo ocasula ukusola Kwami nakanjani ngiyombulala ngaphandle kokumyeka, ngimphathe kanjalo. Ngiyafana kuwo wonke umuntu—anginamizwa futhi angenzi nhlobo ngemizwelo. Kungenzeka kanjani ukuba ngingenzi abantu babone ukulunga nobukhosi Bami? Lokhu kungukuhlakanipha nesimo Sami, okungeguqulwe ngumuntu futhi okungekho muntu ongakwazi ngokuphelele. Izandla Zami zihlala zilawula konke, sonke isikhathi, futhi ngihlala ngilungiselela konke ukuba kungenzele umsebenzi ngokuyalela Kwami. Abantu abaningi benza umsebenzi egameni Lami ukuze bagcwalise uhlelo Lwami lokuphatha, kodwa ekugcineni babona izibusiso kodwa abakwazi ukuzithokozela—kwaze kwadabukisa! Kodwa akekho ongaguqula inhliziyo Yami. Lesi yisinqumo Sami sokuphatha (lapho kuza esinqumweni sokuphatha, lokho kuyilokhu okungekho muntu ongakuguqula, ngakho lapho ngikhuluma esikhathini esizayo, uma kufanele ngibeke umqondo Wami kokuthile, lokhu nakanjani kuyisinqumo Sami sokuphatha. Khumbulani! Asicasulwa! Kungenjalo nizolahlekelwa), siphinde futhi sibe yingxenye yohlelo Lwami lokuphatha. Singumsebenzi Wami, hhayi into engenziwa yinoma ngubani nje. Kufanele ngikwenze lokhu—kufanele ngikuhlele lokhu, okwanele ukuthi kukhombise ukuba Kwami namandla onke nokuveza ulaka Lwami.
Abantu abaningi abakabazi futhi abacacelwa ngobuntu Bami. Sengikusho izikhathi eziningi, kodwa niselufifi futhi aniqondi okutheni. Kodwa lo ngumsebenzi Wami, futhi manje, ngalesi sikhathi, lowo owaziyo, uyazi, futhi lowo ongazi, angiphoqi. Kungaba yile ndlela kuphela. Ngikhulume ngokucacile futhi ngeke ngikusho kamuva (ngoba sengisho okuningi ngokwedlulele, futhi ngakusho ngokucace kakhulu. Lowo owazi Mina nakanjani unomsebenzi kaMoya oNgcwele futhi ngokungangabazeki ungomunye wamadodana Ami angamazibulo. Lowo ongangazi akayona nhlobo, okufakazela ukuthi sengiwuhoshile uMoya Wami kuye). Kodwa ekugcineni, ngiyokwenza wonke umuntu angazi—angazi ngokuphelele kokubili ebuntwini Bami nasebunkulunkulwini Bami. Lezi yizinyathelo zomsebenzi Wami, futhi kufanele ngisebenze ngale ndlela. Lokhu futhi kuyisinqumo Sami sokuphatha. Wonke umuntu kufanele angibize ngoNkulunkulu wangempela okungukuphela Kwakhe, futhi angidumise aphinde angincome ngaphandle kokupheza.
Uhlelo Lwami lokuphatha seluphethwe ngokugcwele, futhi konke kade kufeziwe. Emehlweni omuntu kusengathi umsebenzi Wami omningi usaqhubeka, kodwa sengiwuhlele ngokufanele futhi konke osekulindile ngukuphethwa kwawo ngokwezinyathelo Zami ngazinye (ngoba phambi kokudalwa komhlaba nganqumela ngaphambili labo abakwazi ukubekezelela isilingo, labo abangakwazi ukukhethwa nokunqunyela ngaphambili Yimi, nalabo abangakwazi ukubamba iqhaza ekuhluphekeni Kwami. Labo ababamba iqhaza ekuhluphekeni Kwami, okungukuthi, labo abanqunyelwe ngaphambili futhi bakhethwa Yimi, nakanjani ngiyobagcina futhi ngibenze bakwazi ukwedlula konke). Kungicacele enhliziyweni Yami ukuthi ngubani owenza msebenzi muni. Ngazi kahle ukuthi ngubani ongenzela umsebenzi, ngubani oyindodana engamazibulo, nokuthi ngubani ophakathi kwamadodana Ami nabantu Bami. Ngikwazi lokhu njengengemuva lesandla Sami. Lowo engithe esikhathini esedlule yindodana eyizibulo useyindodana eyizibulo namanje, futhi lowo engithe esikhathini esedlule akayona indodana eyizibulo akayona indodana eyizibulo namanje. Noma yikuphi engikwenzayo, angizisoli ngakho, futhi angikuguquli kalula. Ngisuke ngikuqondile lokho engikushoyo (Kimi akukho okungabalulekile), futhi akuguquki nhlobo! Labo abangenzela umsebenzi bahlala bengenzela umsebenzi: Bayizinkomo Zami; bangamahhashi Ami (kodwa laba bantu abakhanyiselwa nhlobo emoyeni wabo; lapho ngibasebenzisa banosizo, kodwa lapho ngingabasebenzisi ngiyababulala. Lapho ngikhuluma ngezinkomo namahhashi, ngisho labo abangakhanyiselwe emoyeni wabo, abangangazi, futhi abangangilaleli, futhi noma belalela futhi bethoba futhi beqondile baphinde bathembeke, baseyizinkomo namahhashi angempela). Manje, abantu abaningi benza ngokudlebeleka nokungathibeki phambi Kwami, bexoxa futhi behleka ngokunganaki, beziphatha ngokungahloniphi—babona kuphela ubuntu Bami futhi hhayi ubunkulunkulu Bami. Ebuntwini Bami lokhu kuziphatha kungedlula futhi ngiyakwazi ukukuxolela, kodwa ebunkulunkulwini Bami akulula kangako. Esikhathini esizayo ngiyonquma ukuthi wonile ngokungihlambalaza. Ngamanye amazwi, ubuntu Bami bungacasulwa, kodwa ubunkulunkulu Bami abukwazi, futhi lowo ophambana Nami kancane, ngiyomahlulela ngokushesha, ngaphandle kokulibala. Ungacabangi ukuthi ngoba usondelane Nami iminyaka eminingi futhi ungejwayele, ungakhuluma futhi wenze ngokunganaki. Ngempela anginandaba kakhulu! Kungakhathaleki ukuthi ngubani, ngiyomphatha ngokulunga. Yilokhu ukulunga Kwami.
Izimfihlakalo Zami zambulwa kubantu usuku ngosuku, futhi ziya ngokuya zicaca usuku ngosuku, ngokulandela izigaba zesambulo, okwanele ukukhombisa isivinini somsebenzi Wami. Lokhu ngukuhlakanipha Kwami (Angikusho ngokuqondile. Ngikhanyisela amadodana Ami amazibulo bese ngivala amehlo enzalo kadrako omkhulu obomvu). Ngaphezu kwalokho, namuhla ngizokwambula imfihlakalo Yami kini ngeNdodana Yami. Izinto ezingacabangeki kubantu ngizozambula kini namuhla ukuze nginenze nazi ngokugcwele futhi nibe nokuqonda okucacile. Ngaphezu kwalokho, le mfihlakalo ikhona kuwo wonke umuntu ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo, kodwa akekho ongayiqonda. Nakuba ikhona kuwo wonke umuntu, akekho ongayibona. Ngithini? Emsebenzini Wami ngalesi sikhathi futhi emazwini Ami ngalesi sikhathi, ngihlala ngikhuluma ngodrako omkhulu obomvu, uSathane, udeveli, nengelosi enkulu. Bayini? Bahlobene kanjani? Yini ebonakaliswa kulezi zinto? Ukuvezwa kukadrako omkhulu obomvu kungukumelana Nami, ukuntula ukuqonda nokuzwa imiqondo yamazwi Ami, ukungishushisa okuningi, nokufuna ukusebenzisa amacebo ukuphazamisa ukuphatha Kwami. USathane ubonakaliswa njengalokhu okulandelayo: ukubanga Nami amandla, ukufuna ukuphatha abantu Bami abakhethiwe, nokudedela amazwi aphambene ukuze akhohlise abantu Bami. Ukuvezwa kukadeveli (labo abangalamukeli igama Lami, abangakholwa, bonke bangodeveli) kunjengokulandelayo: ukufisa izinjabulo zenyama, ukuzitika ngezinkanuko zobubi, ukuphila ngaphansi kokuboshwa nguSathane, abanye bemelana Nami abanye bengeseka (kodwa bengafakazeli ukuthi bangamadodana Ami angamazibulo). Ukubonakaliswa kwengelosi enkulu kunjengokulandelayo: ukukhuluma ngokwedelela, ukungabi nobunkulunkulu, ukuvama ukuguqula iphimbo lami ukushumayeza abantu, ukugxila kuphela ekulingiseni Mina ngaphandle, ukudla engikudlayo nokusebenzisa engikusebenzisayo; ngamafuphi, ukufuna ukuba sezingeni elilinganayo Nami, ukulangazelela kodwa untule imfaneleko Yami nokungabi nokuphila Kwami, ukuba yincithakalo. USathane, udeveli, nengelosi enkulu bonke bangukubonakaliswa okufanele kukadrako omkhulu obomvu, ngakho labo abanganqunyelwanga ngaphambili futhi abangakhethiwe Yimi bonke bayinzalo kadrako omkhulu obomvu: Lokhu kunjalo ngokungephikwe! Bonke laba bayizitha Zami. (Nokho, iziphazamiso zikaSathane zishiywa ngaphandle. Uma imvelo yakho iyimfaneleko Yami, akekho ongayiguqula. Ngoba manje usaphila enyameni, ngezikhathi ezithile uyobhekana nezilingo zikaSathane—lokhu akugwemeki—kodwa kufanele uhlale ucophelele.) Ngakho, ngiyolahla yonke inzalo kadrako omkhulu obomvu ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo. Imvelo yayo ayikwazi neze ukuguquka, futhi iyimfaneleko kaSathane. Babonakalisa udeveli futhi baphila njengengelosi enkulu. Lokhu kuyiqiniso eliphelele. Udrako omkhulu obomvu engikhuluma ngaye akuyena udrako omkhulu obomvu; empeleni umoya omubi ophikisa Mina, okuyigama elimqondo ofanayo “nodrako omkhulu obomvu”. Ngakho yonke imimoya engaphandle kukaMoya oNgcwele iyimimoya emibi, futhi kungathiwa iyinzalo kadrako omkhulu obomvu. Lokhu kufanele kucace ngokuphelele kuwo wonke umuntu.
Nisahambe ibanga elincane kabi endleleni yekholwa elikholelwa kuNkulunkulu, futhi nisazongena endleleni eyiyona, ngakho liselide kakhulu ibanga ngapha…